Ahoana ny fakana sary amin'ny efijery feno amin'ny WhatsApp | Androidsis
WhatsApp rehefa mandeha ny fotoana dia lasa fampiharana ilaina hifandraisana hatrany amin'ireo olona manan-danja, na miaraka amin'ny fianakaviana, ny namana ary ny tontolon'ny asa. Izy io dia fitaovana malaza amin'ny zavatra rehetra mihetsika, amin'izao fotoana izao eran'izao tontolo izao dia ampiasain'ny olona 1.000 tapitrisa ary miakatra.
Amin'ny telefaona Android dia azo atao ny maka pikantsary, saingy matetika tsy araka ny itiavanao azy ireo izany, satria tsy maka efijery feno izy ireo. Maka sary feno amin'ny WhatsApp ary amin'ny fampiharana hafa dia tsara ny mampiasa rindranasa hitrandrahana izay tena mahaliana antsika.
Ao amin'ny Android dia misy fitaovana roa izay manao azy haingana sy mora, izany rehetra izany dia tsy mila manindry ny bokotra herinaratra sy ny bokotra bokotra eo amin'ny terminal. Misy fampiharana marobe izay mety ilaina amin'ny fizotrany, fa amin'ny tranga misy antsika ny tsara indrindra aorian'ny fitsapana azy dia LongScreenShot.
3,1 megabytes fotsiny no milanja azy, mandany zara raha misy fahatsiarovana ary manao asa tena manandanja tokoa raha ny amin'ny fakana sary feno. Tsotra ny fampiasana azy ary hanazava ny fomba fanaovana azy ireo amin'ny fomba tsotra izahay amin'ny resaka WhatsApp.
Ny zavatra voalohany sy tena ilaina dia ny misintona LongScreenShot avy amin'ny Play Store (azonao atao avy any ambony io)
Vantany vao alaina sy apetraka amin'ny telefaona dia sokafy ny fampiharana
Haneho anao marika + izy, kitiho eo amboniny, izao dia hiseho ny efijery kely eo an-tampony amin'ny fampandrenesana sy ny marika Play etsy ambany
Atombohy izao ny WhatsApp, ohatra, tsindrio ny bokotra Play amin'ny mena ary hanomboka hanangona ny resaka misokatra na ny kiheba ankapobeny izy, tsindrio Puse ary ho azonao ny fakana sary feno voatahiry ao amin'ny Google Photos na ilay fampirimana itehirizany ny sary telefaonina
Ny fizotry ny fakana ny efijery feno dia alaina miaraka amin'i LongScreenShot Tena mora izany, mora be ary afaka manao izay tiantsika amin'ny fampiharana rehetra isika. Tena mahaliana raha te-hanatevin-daharana sary ihany koa isika, satria amin'ny efijery feno foana no anaovany azy.
Fitaovana iray hafa tena mitovy amin'ny LongScreenShot dia LongShot, fampiharana iray izay tena mitovy amin'ny fampiasana azy ary mahasoa toy ilay voalaza etsy ambony. Manamboatra sary feno ihany koa izy amin'ny alàlan'ny tsindry vitsivitsy fotsiny amin'ny efijery ary tsy fantany ny fomba fampiasana azy, satria hasehony anao ny bokotra hanindriana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ahoana ny fakana sary amin'ny efijery feno amin'ny WhatsApp